ब्यावसायिक एवं प्राङ्गरिक तरकारी खेती तालिम भव्य रुपमा समापन::KhojOnline.com
जनसेवा उ.मा.वि. पांगामा असोज १५ गते सनिवार किर्तिपुर नगरपालिका कार्यालय र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल कीर्तिपुर नगर समितिको संयुक्त तत्वावधानमा मिति २०७३ जेठ १० गते देखि २०७३ असोज ११ गते सम्म ब्यावसायिक एवं प्राङ्गरिक तरकारी खेती तालिम भव्य रुपमा समापन भयो ।
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत कीर्तिपुर नगरपालिकाका उद्धव प्रसाद रिजाल (प्रमुख अतिथि) ले पानसमा बत्तिबाली कार्यव्रmम सुरु गरियो थियो भने । कार्यव्रmममा प्रमुख अतिर्थी लगायत अतिर्थीहरुलाई फुलमाला खाँदा ओढाइ प्रसिक्षकहरुले सम्मान गरियो । भने स्वागत मन्तव्य प्रशिर्थी सुरेन्द्र महर्जन दिनुका साथै पाठशालाको प्रतिप्रवेदन विष्णु पौडेलले प्रशिक्र्षीले प्रस्तुत गरिनु भयो । अतिथिको रुपम पाल्नु भएका शहीद पत्रिकाका सम्पादक नारायण महर्जनले व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नको सिकेकोलाई व्यवहारमा प्रयोग अब नगद आर्जनमा ध्यानदिनुपर्ने, बाटोमा, फुट पाथमा बेच्न रोक लगाइएको छ । त्यसको व्यवस्थापन अब किर्तिपुर नगरपालिकाले गर्नु आवश्यक पर्ने रहेको छ । पुरानो तरिकाले खेती गरी जीवन स्तर माथि उठ्दनै व्यावसायिक रुपमा उन्मखु हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । त्यस्तै कृषक सहजकर्ता÷प्रशिक्षक बिमला कार्की ज्यूले जेठ १० गते देखि सञ्चालन भएको तालिममा कृषक सहज कर्ताको नाताले सिकाउन पाउँदा म आफुलाई गौरावान्ति महसुस भएको छ । किसानहरुको दुखः लाग्दो र डरलाग्दो कुरा केछ भने सरकारले एकातिर कृषिलाई सहज गर्नु पर्छ भनि हौसला बढाउन अनियमित ढंगले अनुदान दिइरहेको भने अर्काेतिर त्यहि उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई निराशा बनाउने खेती योग्य जमीनलाई विकासको नाउँमा जथाभावी प्लटिङ्ग र बाटो बनाई जमिन सिध्यादैछ । त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । आउँदा दिनहरुमा पनि नगरले व्यवसायिक कृषकलाई निरन्तर सहयोग पु¥याउने आशा राख्दै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । साथै सेवा केन्द्र प्रमुख मोती कला विक, लगायत अन्य अतिर्थीहरुले मन्तव्य राख्नुका साथै केन्द्रीय बिउ उत्पादन संस्था निर्मला राइको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
यस व्यावसायिक खेतिमा गोल भेडाकाविउ लगाउने देखि लिएर ब्याड बनाउने सम्म सिकेको थियो प्रदुषण रहित वातावरण बनाउनको निम्ति रासायनिक मल बिना आइ.पि. एम घेरलु विषादी बनाउने प्रकृया लगायत कृषकहरुको व्यतित्व विकास पनि कक्षामा सिकाएको थियो । भने रासायिनिक विषादी राखेर मात्र बाली राम्रो नहुने र शरीरलाई समेत हानी हुने तालिममा उपस्थिति भएको सम्पूर्ण कृषकहरुलाई सिक्ने अवसर पायो । उक्त तालिम तालिममा बेरोजगार युवाहरुलाई लगायत कृषकहरुलाई लक्षित गरि व्यावसियक गोलभेडा खेती, धँनिया खेती लगायत माहुरी पालनको समेत कक्षा भएको थियो । उक्त तालिममा कीर्तिपुर, पांगा, नगाऊ, लनगोल, चोभार, नैकापका कृषि जम्मा ४० जना भन्दा बढी कृषकहरुले तालिम लिनुभएको थियो । कार्यव्रmममा पञ्चकन्याबाट राष्ट्रिय गान, नेपाल भाषाको लोक गीतमा काठमाडौंबाट पाल्नु भएको तबला बाधक कलाकार मैतिबाट इन्द्रमान महर्जनले क्षमक्षमी नचाउनुको साथै विभिन्न सांस्कृति झल्किने नाचगान प्रर्दशन, कृषि सम्बन्धति गीत प्रस्तुत गरिनुका साथै साथ कविता पनि वाचन गरियो ।
राष्ट्रिय कृषक सूमह महासंघ, नेपाल कीर्तिपुर नगर समिति (संयोजक) गोपलमान महर्जनले व्यावसायिक तालिम कृषकहरुको लागि पहिलो खुड्किलो हो । अब अर्को खुड्कीलो चढ्नको लागि धेरै मिहेनत गरिनु आवश्यक रहेको छ । अनि मात्रै सफलता मिल्दछ छ पार गर्दै जादाअनेकौ समस्याहरु आइ रहन्छ । मौसमले साथ दिइएन भने धेरै घाटा हुन् सक्ने भएकोले होस पु¥याउने आवश्यक रहेको छ । कृषक दाजूदिदी बहनीहरुले आउँदा दिनहरुमा च्याउँखेति लगायत ५ बर्ष सम्म यस्तै कृषी तालिम आयोजना गरिरहनेछु ।
प्रमुख अतिथिज्यू कीर्तिपुर सहर एउटा कृषकहरुको बाहुल्यता भएको रमणीय ठाउँ हो । यसको पहिचानलाई जोगाउनु अति आवश्यक रहेको छ । जहाँ महिलाहरुको विकास हुन्छ त्यस ठाउँको विकास भएको हुन्छ । त्यसैले महिलाहरुको सिपमा विकास गरिनु आवश्यक रहेको छ । राष्ट्रिय कृषक महासंघ कीर्तिपुर नगर समिति अत्यन्तै राम्रो काम गरि उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गरिएको कीर्तिपुर नपा तर्पmबाट सहयोगको प्रतिबृद्धता जाहेरी गरियो । उहाले सम्पूण प्रशिक्षकहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनु भयो ।
कार्यव्रmमको उदघोषण राष्ट्रिय कृषिक समुह महासंघ किर्तिपुर उपसचिव मचाभाइ महर्जन गरिनु भएको थियो ।